अप्रील 10, 2018 अप्रील 10, 2018 साइन्स इन्फोटेक	4 Comments ब्रह्माण्ड
प्रकृति, अन्तरीक्ष र समय, पदार्थर उर्जा, भौतिक नियम र सृष्टि सञ्चालन आदि सम्पूर्ण कुराहरू अटाउनेलाई ब्रह्माण्ड (Universe) भनिन् छ । ब्रह्माण्डभित्र सम्पूर्ण आकाशगंगा, तारा, ग्रह, उपग्रह आदि पर्दछन । ब्रह्माण्ड जसलाई अङ्ग्रेजीमा “Universe” भनिन्छ, धेरैको विचार अनुसार महाब्रह्माण्डमा फैलिंदो स्थिति जसबाट चुँडिएको भागलाई ब्रह्माण्ड भनेर भनिन्छ । धेरैवटा ब्रह्माण्डको समूहलाई महाब्रह्माण्ड (Multiverse) भनिन्छ ।
ब्रह्माण्डका पुराना अंशहरूको अवलोकनबाट यो तथ्य फेला परेकोछ कि पूरै ब्रह्माण्डको सृष्टिमा एउटै स्थायी नियम रहेको छ। आजसम्म ब्रह्माण्डका विषयमा धेरै परिकल्पनाहरूर सिद्धान्तहरू अघि सारिए । जसमा कोपर्निकसले सूर्य केन्द्रित (heliocentric) अथवा “ग्रहहरू सूर्यलाई केन्द्र बनाएर घुम्छन् र सूर्य स्थायी हुन्छ” भन्ने परिकल्पना तयार गरे। यो भन्दा अघि संसारका धेरै भागहरू (भारत,ग्रीक,चीनआदि) का मानिसहरू सौरमण्डललाई पृथ्वी केन्द्रित (geocentric) मान्थे र सम्पूर्ण सूर्य र अन्य ग्रह पृथिवीको धुरीमा घुमेको मान्थे। वर्तमान वैज्ञानिक सिद्धान्त अनुसार ब्रह्माण्डको उत्पत्ति महा विस्फोट (Big Bang) बाट भएको हो र यसपछि ब्रह्माण्डको विस्तार शुरु भएको हो ।
खगोल बिज्ञान भनेको के हो ? नेपालमा खगोल बिज्ञानको अवस्था कस्तो छ ।
सेप्टेम्बर 24, 2018 अक्टोबर 16, 2019 साइन्स इन्फोटेक 1
4 thoughts on “ब्रह्माण्ड (Universe) भनेको के हो ?”
Pingback:चट्याङबाट कसरी बच्ने ? जनचेतनाको लागि सक्दो शेयर गरौँ